DIINQA OROMOO: Tola Ooltummaa: Aadde Duurettii Taaddasaa (Miimmii), Fulbaana 11, 2018-Kutaa 1ffaa
September 12, 2018 Beekan Guluma Post in DOM-Diinqa Oromo Media,Ethiopian Poletics
Aaddee Dureettii Taaddasaa jedhamti. Oromiyaatti dhalattee guddatte. Bara mootummaa Dargii jalqabee dararaa dubartiin Oromoo tokko keessa dabarsitu mara dabarsiteetti. Mana hidhaa ‘Maa’ikelaawwii’ jedhamu kan Impaayerri Xoophiyaa Oromoofi saba biro keessaatti dhiphisu keessaatti hidhateetti. Abbaan manaashee sababa Oromummaaf jecha hidhaa waggaa 10 olii mana hidhicachaa keessaatti dabarseera. Dararaa dheeraan booda karaa biyya ollaa biyyaan biyya qabanii baqaan biyya alaa kana seenanii carraa jireenyaa argatan.
Durettiin erga biyya Amarikaa keessa geessees Oromoota biyya ollaarraafi carraa lootorii DVtiin biyya Amarikaa qaqqaban tola ooltummaadhaan qubachiistee hanga hojii qabsiisuutti faana dhama’aa turte. Haata’u malee yeroo tokko gadi teessee yaadde. Dubartoota Oromoo dararaa isheen dabarsite sana keessa jiran yaaddee boqonnaa dhabde. Ta’us mul’ata tokko qabattee gadi baate. Mul’anni sunis waan dandeessuun dubarootota Oromoo biyya keessaa qaqqabudha. Waan qabdu harkatti qabatteetu nama isheef gumaachuu danda’an iyyaafatte. Maatiisheerraa eegalte. Sa’a bittee dubartoota Oromoo qaqqabde.
Sa’a sadiin eegalte. Har’a saawwan/Hameessa 166 ol bittee Oromoof hirteetti. Saawwan 81 dhalanii jabbii qabu. Aadaa ‘Dabaree’ jedhamus hojiirra oolchiteetti. Saani dhaltu sun goromtii yoo taate dubartoonni dabarsanii dubartii akka isaaniif tola dabarsanii kennu. Yoo korma ta’e ittiin qotatu. Fakkeenyaaf, dubartoonni lama yoo saani isaanii lamaanuu dibicha dhalte waliin camadatanii cimdii taasifatu. Ittiin abbooliin manaa isaanii lafa qotatu. Sana qofa miti. Barumsaa leenjii leenjistootaa kenniti. Yeroo saddeet ol biyyatti deddeebi’uun barumsa kenniteetti. Shamarran mana barumsaatti jajjabeessiteetti. Saamunaafi uffata gumaachiteetti. Haala ittiin qulqullummaa qaamaa eeggatanis barsiifteetti.
Lafa bishaanii qocchisiifteetti. Namoota kumaa ol gargaaruu kan danda’u doolaara biyya Amarikaa Kuma 40 oliin hojjechiisteetti. Ammas piroojaktii guddaa harkaa qabdi. Saawwan saffisaan baayyataa jiraniif wiirtuu giddu gala fayyaa Horii tokko dhaabuu barbaaddi. Sana qofas miti. Giddu gala manaa kan Aannaniifi dhadhaa itti gurguratanis ijaaruufi feeti. Haata’u malee yaadni qajeelaan kun humnashee ol ta’ee jira. Gargaarsa barbaaddi. Kanaafis ‘go fund’ bantee kadhataa jirti.
Gaafa dubbattu imimmaaniin dubbatti. Rakkoofi gidiraan haadha Oromoo boqonnaa ishee dhorkeera. Hayyootarraa gumaacha feeti. Dhaabbilee addaa addaatti akka katabaniif feeti. Ammayyuu dubartoonni Oromoo hedduutu harka na ilaalaa jira jettee tibba Oromiyaa dhaqxu hunda waliin boossi. Nutis hojiishee kana siniin ga’uuf gaaffiif deebii kutaa sadii qabu walduraa duubaan fudhanneerra. Dhaggeeffadhaa; itti yaadaa; cinaa dhaabbadhaa; teessoonshee kunooti. Kutaa 2ffaafi 3ffaan walduraa duubaan itti fufa. Namoonni ishee dubbisuu barbaaddan teessoo kanaa gadiitiin ishee argattu.
Marsariitiin/ website/ : www.cgweafrica.com
Feesuubuukii (Facebook page): www.facebook.com/Cgweafrica
Dhugaa Ganama—Falaasama Oromo (Xinjireenya Oromo—Oromo Ontology or Metaphysics)-By Professor Yoseph Mulugeta Baba
DIINQA OROMOO: Dubartoota Oromoo Tumsuu: Aadde Duurettii Taaddasaa [Miimmii] Fulbaana 12, 2018-Kutaa 2ffaa